Dhakhtar | Zanzu
Qof loo tababo baray inuu daweeyo dadka jirran. Dhakhtaradu waxay qoraan dawooyinka. Dhakhtarku waxa uu noqon karaa nin ama haweenay. Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka wax ku saabsan galmada, ka hortagga uurka iyo uurka. Dhakhtarka looma oggolo inuu u sheego dadka kale waxaad u sheegtay isaga ama iyadda. Tani waa macluumaad qarsoodi ah (sir).
Standard term: Dokter
Neutral term: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts
Daryeelka ka hor dhalmada
Diiwaanka Caafimaadka la Isku keenay
Ka xidhidha dhalmada
Magdhowga la kordhiyay
Sanduuqa caymiska caafimaadka